Date My Pet » Nahoana no Tall Hampiaraka Shorter ankizivavy ry zalahy
Last nohavaozina: Nov. 19 2019 | 2 min namaky
Iza avy any mbola mitondra ny datin 'ny tovovavy lava noho izy ireo, na ny lehilahy fohy kokoa noho ny azy ireo? Ahoana no foiko? Hafahafa, na dia izany aina fotsiny? Ity resaka ity, dia hafakely ny mampiaraka toerana nandritra ny fotoana kelikely izao, toy ny sasany izay mino dia tsy tokony hampiaraka ny olona tovovavy lava noho izy na fohy noho ny azy ireo ry zalahy. Izany fotoana avo teoria io dia demystified amin'ny zava-misy!
Ok, ka angamba mety mahatsapa somary hafahafa hiondrika teo hanoroka ny lehilahy izay fohy izany satria nino fa tsy maintsy ho ry zalahy fa lava kokoa noho? Fa aiza no izany fitsipika avy? No hevitry ny hoe izany ry zalahy fohy sy lava ankizivavy tokony mampiaraka fotsiny na oviana na oviana noho ny fitsipika ao amin'ny mampiaraka sehatra?
Ahoana raha tia ny zazavavy avo bandy fohy sy ny mifamadika amin'izany? Tokony halatsa rehetra midina ho tiany manokana toy ny misy ireo izay tena tia lava kokoa noho ny ankizivavy sy fohy ry zalahy, mino izany na tsy! Ary ny olona toy izany dia hitohy ny mampiaraka, irrespective ny zavatra hafa hoe.
Raha mbola maharitra koa ny lehilahy sy ny zazavavy dia mahazo aina amin'ny tsirairay ny haavony, dia tsy misy olon-kafa no manan-jo miezaka nanery hanaovana ny heviny momba azy ireo. Ilaina ny manana teoria io demystified toy ny sasany izay mbola milaza fa mora kokoa noho ny nanaovanareo hoe:, nampiany hoe ry zalahy no nampifandraisina mivantana ireo lalandava ho lava noho ny ankizivavy, ary mahatsiaro ho hafahafa foana raha toa izy ireo fohy.
Voalaza fa ny bandy tsy voatery ho hevitra izany, fa ny sasany dia manao fanamarihana dia hanala sarona ny tsy mahazo aina izy ireo amin'ny lava tovovavy. Tsy mbola nisy na inona na inona momba ny lehilahy manintona izay saro-tahotra ny tenany.
Hatoky tena foana Mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny toe-javatra toy izany. Koa satria ireo koa dia ny daty, avy eo ry zalahy fohy maintsy matoky eo ny hoditra ary aza manahy momba ny hahavony. Mety baolina azy ireo mihitsy aza ny daty amin'ny ankizivavy fa lava izay fancied, fa tsy nihevitra fa hiara-mivoaka aminy noho ny hahavony.
Oh yeah, avo be ny ankizivavy tsy tokony mbola mitsiky ihany koa izy ireo manan-teny kely mba hianatra ny tenany. Niaraka ny lehilahy fohy tsy manome anao zo manisy tahamaina ny hahavony fahampiana teo ny tendany. Omeo ny lehilahy iray ny fakan-drivotra, ny mafy ampy manana ny tiptoe mba hanome anareo ny oroka!
Lava, maizina, ary tsara tarehy tsy voatery ho ny mahazatra. Araka ny ambony toa manintona, dia tsy tokony ho ny manapa-kevitra raha toa ka misy antony toetra izay manintona kokoa.
Aza mampiaraka ny haavony, daty ny olona! Dia tena azo atao ny mahita lehilahy iray izay lava, fa miaraka amin'ny toetra na toe-tsaina mihitsy aza ny habe amin'ny pea. Izany ihany koa ny ankizivavy. Ny haavon'ny tokony ho tsy ampy taona ihany no lafin-javatra, Tsy misy fanapahan-kevitra mahatonga. Raha mitranga ny mampiaraka ny olona miaraka amin'ny avo dia maniry, tsara dia tsara. Raha tsy, dia mbola tsara sy tsara.
Ho an'ireo izay mametraka haavon'ny ho laharam-pahamehana voalohany, rehefa mitady daty, dia tokony hieritreritra ny tenany aloha rehefa mety ho afaka ireo amin'ny olana. Ny ambony dia tsy azo fehezina, fa ny toe-tsaina afaka. Angamba izany no hany fomba manana teoria io fa lava kokoa noho ny ankizivavy ny amin'ny fohifohy kokoa ry zalahy demystified.